blog(fp) | Subin Bhattarai
‘बाहिर बत्तीको झिलिमिलि छ, तर भित्र म निभेको छु ।’ यो पंक्ति मेरो उपन्यास ‘समर लभ’ बाट हो । लक्ष्मीपूजाको दिन प्रेम बियोगको पीडामा छट्पटाइरहेको एउटा पात्रको मनदेखिको बिलौना हो यो । कुनै कुनै तिहारमा म स्वयम्लाई पनि यो स्तरको नैराश्यले नघेरेको होइन । बाहिर उज्यालोको साम्राज्य जतिसुकै फैलिएको होस्, भित्र पीडाको अन्धकारमा खुम्चिएर म […]
‘प्रिय सुफी’ लेख्दाका खुसी र सास्ती
कुनै पनि कथा उत्कृष्ट हुनको लागि त्यसले सबैभन्दा पहिले लेखक स्वयम्लाई छुनुपर्छ । लेखकलाई छोइसकेपछि, त्यसले लेखकजस्तै मन मुटु भएका हजारौँ पाठकलाई पनि छुन्छ । तर सबैलाई छुँदैन । जति नै राम्रो लेखेपनि त्यसको स्वाद सबैलाई मिठो लाग्छ भन्ने छैन जसरी जति नै मिठो खानेकुरा पाकेपनि त्यो सबैको रुचीको सूचीमा पर्दैन । पाठक कुनै पनि […]
Priya Sufi Trailer
अलिकति अतृप्त हुनु राम्रो । अलिकति खालीपना कति सुन्दर हुन्छ । अलिकति तडप पनि बेस्वादिलो कहाँ हुन्छ ? अलिकति धोका नराम्रो कहाँ हुन्छ ? अलिकति रिस पनि राम्रै हुन्छ । अलिकति छट्पटि पनि मज्जै हुन्छ । जीवन सबै मानेमा, सबै क्षेत्रमा पूर्ण कसैको हुँदैन । भए त्यही जीवन सुन्दर कसैको रहँदैन । हामीलाई पूर्णताको […]
त्यहाँ जानु छैन, किनकि अहिलेसम्म गएको छैन । त्यो खानु छैन, किनकि अहिलेसम्म खाएको छैन । त्यसो गर्नु छैन, किनकि अहिलेसम्म गरेको छैन । यसो भन्ने हामी कति छौँ । हामी कहिल्यै नबोलेको मान्छेसित बोल्न हिच्किचाउँछौँ । नयाँ भन्ने चीज हामीलाई बडो जोखिम लाग्छ । कतै फसाउने हो कि । कतै झुक्क्याउने पो हो […]
एउटा झोला हुने गथ्र्यो । जसलाई बोकेर जहीँत्यहीँ लगिन्थ्यो । लूगाफाटा, ब्रस, क्यामेरा, काइँयो, कपालमा लगाउने तेल, मुखमा लाउने क्रिम, चप्पल, आदि इत्यादी अटाइनअटाइ, कोचीकोची हुलिन्थ्यो । झोलाको भुँडी अघाएर टम्म फुल्थ्यो । ठाउँ ठाउँका सिलाइका धागाहरु रस्साकस्सी गर्दै गरेको अवस्थामा देखिन थाल्थे । यात्राबाट मसँगै थाकेर आउँथ्यो झोला पनि । म पल्टन्थेँ खाटमा […]
मैले बाँचेर आएको एउटा सुन्दर समय छ । के कसैले खोसेर देखाउन सक्छ त्यो अतीत म र मेरो स्मृतीबाट ? मैले चुहाएका आँशुका धाराहरु मेरा आँखाको डिलमा उहिल्यै सुकिसकेको छ । मैले हाँसेका हाँसोका गुञ्जन अतीतको गर्तमै कतै लोप भइसकेको छ । मैले मानेका उदासीहरु पनि समयको भुमरीभित्रै कतै हराइसकेको छ । मभित्रबाट कुर्लिएका क्रोधका […]
विचार मिल्ने/ विचार नमिल्ने
उमेर बढ्दै गएपछि सोचहरू पनि बद्लिँदै जाँदा रहेछन् । त्यही एउटै चीजलाई हेर्ने आँखा पनि फरक भैदिँदो रहेछ । पुराना कुराहरू नयाँ लाग्दा रहेछन् र केही नयाँ कुरा पुराना पनि लाग्दा रहेछन् ।एउटा सोचमा यसैगरी परिवर्तन आएको म भर्खरै महसुस गर्दैछु । पहिले-पहिले म सोच्थेँ, जोसँग विचार मिल्छ उसैसित मन पनि मिल्छ र उही सबैभन्दा […]
हामी सपनालाई चरा मान्छौँ तर त्यसलाई निस्फिक्री आकाशमा उड्न नदिएर पिँजडामा कैद गर्छौँ । हामी सपनालाई धरती मान्छौँ तर तिनमा हरिया बृक्षहरुलाई रोप्न, हुर्काउन, बढाउन, स्याहार्न अल्छी मान्छौँ । हामी सपनाहरु जन्माउँछौँ तर जन्मिएका ती सपनालाई उचित पोषण दिँदैनौ । कलिला ती सपनालाई सुम्सुम्याउन खोज्दैनौँ । सपनाको कलिलो हात समातेर डो¥याउँदै कहीँ लैजान हिच्किचाउँछौँ । […]
दुःख दुखै हो । दुःखको रङ्ग सुखको रङ्गभन्दा धेरै फरक छ । हरकोहीलाई यो छेउमै नआइदियोस् जस्तो लाग्छ । हर कोहीलाई यसको छेउछाउबाट पनि गुज्रनुु नपरोस् जस्तो लाग्छ । मान्छे दुखी हुनु नपरोस् भन्ने संघर्ष गर्दा गर्दा थाकेर दुखी छ । मान्छे संसारमा दुःख किन छ भन्ने सोचेर नै दुखी छ । मान्छे सुखको धेरै […]